Asia Korea Atsimo Sokcho
Toerana: Seoraksan, Buk-myeon, Inje-gun, Buk-myeon, Inje, Korea Atsimo
Ambony ambony ambony ranomasina: 1.708 m
Tendrombohitra Tendrombohitra: Tendrombohitra Koreana Tavaratra
Ny saran'ny fitsidihana ilay valan-javaboary: $ 3.1
Any avaratra-atsinanan'i Korea atsimo, akaikin'ny tanànan'i Sokcho , toerana iray misy ny valan-javaboary malaza indrindra ao amin'ny firenena - Soraksan, tapaka manodidina ny tendrombohitra. Ho an'ny fahasamihafany ara-boajanahary, dia izy mihitsy aza no lasa kandidà amin'ny fanasongadinana ny lisitry ny herin'ny UNESCO. Miaraka amin'ny fiandohan'ny lohataona, ny ankamaroan'ny mponina sy ny mpizahatany tonga eto mba hiakatra any amin'ny tendrombohitra Soraksan.
Fahitana ny tendrombohitra
Ity ridge ity no fampianarana fahatelo lehibe indrindra any amin'ny firenena, faharoa amin'ny volkano Hallasan sy ny tendrombohitr'i Chirisan . Ny laharana farany amin'ny Soraksan dia ny tampon'I Daechebonbon (1708 m). Fa ny hatsaran 'ireo tendrombohitra ireo dia tsy misy mitovy. Ny tendron-tsoratry ny tendron-tsorony dia mihodina amin'ny rahona, ary ny lembalemba dia milevina any anaty ala maina.
Miorina eo an-tampon'ny tendrombohitra Soraxan, maniry ny hazo kesika, sedera, hazo palmie ary hazo oaka. Avy amin'ny zavamaniry kely eto dia azonao atao ny lakolosy edelweiss, azaleas sy lokanga eo an-toerana. Ao amin'ny valan-javamaniry voaarona akaikin'ny tendrombohitra Soraxan, misy karazana biby 2000, izay tsy dia mahazatra loatra ireo dia ny serfa sy ny osy. Amin'ireo olona 700 avy amin'ireny karazana osy ireny voasoratra eto amin'ny firenena, 100-200 no hita tao amin'io tahiry io.
Tsidiho ny valan-tserasanan'i Soraksan ao Korea Atsimo mba hijerena ireo zavatra tsy manan-tsahala:
ny ranomandry Piren sy Yuktam, izay mipetraka eo amin'ny fidirana amin'ny faritra voaaro;
fananganana vatolampy goavana ao Ulsanbawi;
Hyndylbawi vato vatosokajy vato 5 m avo;
ny Lohasahan'i Cheonbooldon, izay midika hoe "A Thousand Buddhas";
ny lohasaha vato any Pisona;
loharano mafana ao Osek, niforitra teo akaikin'ny tempolin'i Songuks;
sarivongan'i Boddha sarobidy, mipetraka eo am-baravarankely;
Zavona kely misy an'i Gumgangul, izay toeram-pivavahana ho an'ny Bouddha.
Tonga eto ny mpizaha tany mba handresy ny tampon'I Daechebonne, manomboka ny toerana mahavariana mahavariana ny lohasaha sy ny tany amin'ny Ranomasin'i Japana. Misy toeram-ponenana an-tendrombohitra, izay azo vakiana amin'ny fialam-boly any amin'ny valam-pirenena ao Soraksan any Korea Atsimo.
Ny Tendrombohitra Ulsanbawi dia mahaliana ho an'ny lavaka goavam-be granite. Tao anatin'izany taonjato maro lasa izay dia tempoly roa Bodista no natsangana.
Fizahan-tany any an-tendrombohitra ao Soraksan
Ity tendrombohitra ity dia malaza amin'ny mpanohana ny fanjonoana, ny toekarena fizahan-tany, ny mpankafy ny natiora ary ny mpizaha-tany, izay vizana noho ny tabataba. Ny sasany amin'izy ireo dia voantso hitsidika an'i Soraksan tamin'ny volana Aprily, ny hafa - amin'ny fararano, rehefa voasaron'ny volon'arabe mena sy mavo ny hazo. Na ahoana na ahoana, ny hankafizana ny hatsaran-tarehy sy ny fiadanana amin'ity faritra ity, tsara kokoa ny mandeha mandeha amin'ny herinandro. Amin'ny faran'ny herinandro sy ny fialantsasatra, noho ny habetsahan'ny mpitsidika, ora maro no mitambatra ny fifamoivoizana.
Ireo mpizahatena tsy manana traikefa mba hiakatra ny tendrombohitra ao Soraksan dia tokony hifidy lalana malalaka. Ireo mpankafy marobe mitazona andro maromaro dia miandry olona fanta-daza amin'ny firenena be tendrombohitra. Avy eny an-tampon'ny tendrombohitra Soraxan dia afaka mankafy ny hakanton'ny riandrano izay latsaka avy amin'ny vatolampy, rakotra lohasaha maitso sy zana-borona tsy misy fiafarana.
Ahoana no hahatongavana any Soraksan?
Ireo mpizahatany izay nanapa-kevitra ny handresy ireo tendrombohitra ireo, dia tokony handeha ho eny amin'ny zaridaina maraina. Ireo izay tsy mahafantatra ny fomba hahatongavana any Soronsana avy any Seoul dia tokony hanararaotra ny fitaterana an-dalamby. Isan'andro dia misy fiaran-dalamby miainga avy ao amin'ny fiantsonan'ny bus Bus Seoul Express, izay mijanona ao Sokcho . Eto ianao dia afaka mitondra ny bus 3, 7 na 9. Ny dia iray dia mihoatra ny 3-4 ora. Ny saran-dalana dia manodidina ny $ 17. Tickets tena tsara indrindra mialoha.
Toeram-ponenana nasionalin'i Hitachi
Fiarovana amin'ny trano fametrahana
Sour Cake - fomba mahazatra
Fetin'ny ririnina 2013
Pamela Anderson: "Nateraka brunette aho"
Garderobe mampidi-doza: 5 zavatra izay manimba angovo
Famantarana ny tsy misy
Sarin'ity andro ity: Shakira 39 taona tsy misy fananganana ao Instagram
12 herinandro ho an'ny bevohoka
Inona no hohanina amin'ny alika kisoa?
Salady misy vary sy salady mavokely
Ahoana ny fifandraisana amin'ny sakafo mahasalama?
Bronchicum ho an'ny ankizy
Ahoana ny fampitana ny chlamydia?
Inona no nofinofin'ny voay any anaty rano?
Fankalazana ho an'ny antoko bachelorette
Polyp amin'ny tranon-kibo - antony